တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူ start ကိုဘယ်လို | USAHello ထံမှအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
အကျိုးအမြတ်မယူသောလူကိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်. တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူစတင်ရန်ဘယ်လို Read နှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကူညီ.
သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကကူညီမယ့်အစီအစဉ်ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းက - သင်သည်အစဉ်အတစ်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောဘယ်လိုစတင်သလဲသိချင်ဖူး? ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖော်ထုတ်ရန်ယူနိုင်ပါသည်အဆင့်အချို့ရှိပါသည်, အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေ, အသက်ရှင်ခြင်းရန်သင့်စိတ်ကူးကိုရောက်စေ. အကျိုးအမြတ်မယူလည်းခေါ်ကြသည် “ပရဟိတလုပ်ငန်း။”
ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသင်သည်ဖြေရှင်းချင်စေခြင်းငှါတိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကြ. သင်တို့မူကားတစ်ဦးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောစတင်သူတို့ကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမတိုင်မီ, အခြားဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ပါဘယ်အရာကိုမြင်မှဂရုတစိုက်စစ်ဆေး. တခါတရံမှာပြီးသားကိုကူညီနိုငျသောအကျိုးအမြတ်မယူအဖှဲ့အစညျးတည်ရှိ!
မည်သည့်ပြဿနာဖြေရှင်းရေး၏ စတင်. ပွိုင့်ပြဿနာကိုသတိထားဖြစ်နေလို့ပါ. သင်တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူ start ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားသကဲ့သို့ပင်, သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များဘာတွေလုပ်နေလဲ? သငျသညျကျောင်းသားများကိုကျောင်းထွက်ကျဆင်းနေသို့မဟုတ်အတန်းပျက်ကွက်တွေ့မြင်ပါသလား? သငျသညျအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသစ်ရောက်ရှိလာသောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်ကူညီပေးမည့်လိုအပ်ချက်ရှိကွောငျးမြင်စေခြင်းငှါ. သင်ထိုပြဿနာကိုရှာဖွေတစ်ချိန်ကဖြေရှင်းချက်စဉ်းစားစတင်ရန်နှင့်သင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုထုတ်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်မယူစုစည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့, သင်ကဖော်ပြသောနာမည်တစ်ခုနှင့်အတူတက်လာသင့်တယ်. သင့်အနေဖြင့်အကျိုးအမြတ်မယူပါဘူးအဘယျသို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူကိုဖော်ပြသောနာမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်. တချို့ကအကျိုးအမြတ်မဟုတ်သည်တစ်ဦးအယူအဆဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲရှိတဦးတည်းစကားလုံးကိုသုံးပါ. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ရှေ့တော်၌အသုံးပြုသောရသေးကြောင်း Check. သငျသညျပြည်နယ်၏အတွင်းရေးမှူး၏ရုံးကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်, ဤရုံးများ၏တဦးတည်းရှိတယ်. သင်၏အမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်, သငျသညျသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်နှင့်လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်စာတမ်း file ပါလိမ့်မယ် “ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများကို။”
3. တစ်ဦး IRS ကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထား
အကျိုးအမြတ်မယူသော ငွေရှာမရဆိုလိုတယ်. အကျိုးအမြတ်မယူသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ရမလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. သင်ပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာမည်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရမယ်. အဆိုပါပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုပုံစံ၏သုံးသပ်ချက်ကိုယူပါလိမ့်မယ်. သူတို့သည်သင့်အရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားပါလျှင်, သငျသညျအရလိမ့်မယ် 501(က c)(3) အဆင့်အတန်း.
သင်တစ်ဦး business plan ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ကြသည်မဟုတ်သော်လည်း! ဒါကအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောဘယ်လိုစတင်သလဲအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်မရှိရင်, သငျသညျယူရန်သင့်အားလိုအပ်သည့်ခြေလှမ်းများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သဘောမျိုးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သငျသညျမြှင့်ဖို့လိုအပ်ငွေကို, နှင့်သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို.
သငျသညျအကျိုးအမြတ်မယူပြီးပြီ၏ဆောင်းပါးတယ်ပြီးတာနဲ့, သင်ကထည့်သွင်းရွေးချယ်နိုင်သည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်သင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရငါပေးမည်. ဖိုင်တွေနဲ့အခကြေးငွေပြည်နယ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်. ဆွဲသွင်းပါဝင်သင့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော register လုပ်သွား, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်မထားဘူး 501(က c)(3) လွတ်လပ်သော.
6. သင့်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ Build
တစ်ဦးကဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြောင်းလူမျိုး၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဒီအလုပ်အတွက်ပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်. သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းအပေါ်အလုပ်လုပ်မှန်းချက်ရဲ့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ကူညီ. သူတို့ကအစရန်ပုံငွေကူညီခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုအခြားလူများပြောပြ. ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၏ဘုတ်အဖွဲ့တွင်လူပေါင်းထားရှိခြင်း, လူမျိုး, နှင့်အသက်မွေးဝမ်းအသစ်သောအတွေးအခေါ်များကိုဆောင်တတ်၏.
သင်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်မယူစတင်ရန်မည်မျှပိုက်ဆံမလိုအပ်ပါဘူး? သင်တစ်ဦးရုံးကိုငှားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကူညီပေးရန်အခြားလူကိုငှားရမ်းလိုလျှင်ဆုံးဖြတ်. သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်စာရင်းပြုစုဖို့အချိန်ကိုယူ. ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉျးစားကွညျ့. သငျသညျချေးနိုင်တဲ့အရာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, အဘို့အ bargain, ဒါမှမဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှလှူဒါန်းရ.
သင်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်အခါတိုင်း, သငျသညျထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့ညာဖက်ကလူနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ. key ကိုလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများထွက်စာရင်း, နှင့်သင့်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုပြောပြ. စာကြည့်တိုက်, non-profit အဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးစင်တာများသို့ဆက်သွယ်အားလုံးကိုကြီးစွာသောနေရာများဖြစ်ကြသည်. ဥပမာ, သင့်ရဲ့စိတ်ကူးလူငယ်များသည်ကျောင်းပြီးနောက်ဘတ်စကက်ဘောကစားရှိသည်ဖို့ပါလျှင်, သင်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာနှင့်အချို့နည်းပြနှင့်အတူမိတ်ဖက်တတျနိုငျသ.